Ma runbaa in insaanka uu ku dagay dayaxa dushiisa?? xaqiiqo badan halkaan ka ogoow. – Filimside.net
Ma runbaa in insaanka uu ku dagay dayaxa dushiisa?? xaqiiqo badan halkaan ka ogoow.
In insaanka dayaxa dushiisa ku dagay waxay aheyd dood soo taagneyd tan iyo markii wakaalada NASA (National Aeronautics and Space Administration) ee Mareykanka laga leeyahay sheegatay iney dayaxa dushiisa ku dageen sanadkii 1969kii.
Ilaa iyo maantadaan la joogo ma uusan soo dhamaanin dooda la xiriirta in insaanka uu ku dagtay dayaxa dushiisa ama dhacdadaas ay aheyd khiyaano ay sameysay USA si ay u khiyaanto midowgii Soofiyeet ee burburay.
Waa wax layaab leh misna aanan la fahmi Karin in uusan Mareykanka markale uusan dayaxa dushiisa tagin iyadoo waliba ay kasoo wareegatay mudo 50 sano ah markii ay sheegteen in dayaxa dushiisa ku dageen tiiyoo ay jirto in maanta tiknoolooji ahaan aduunka dhinac kasta kahormaray marka sidee ku dhici kartaa ineysan sameynin wax ay 49 sano kahor sameeyeen waa su’aal markasta taagnaan doonto.
Doontii Apolo11 waa midi ay wakaalada NASA oo mareykanka u qaabilsan hawada sanadkii 1969kii hawada u dirtay taasoo ay saarnaayeen 12 cirbixiyeen.
Baaritaano dheer oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in shacabka mareykanka naftiisa 20% kamid ah ay qabaan in arinka ah dayaxaa la tagay ay been cad tahay si lamid ah 28% shacabka reer Rusia waxay qabaan in waxaani mala awaal yihiin, waxayna aaminsanyihiin inuu yahay filim Hollywood oo kale kaasoo ay sameysay wakaalada NASA si aduun weynaha ugu dhaadhiciso in dhanka hawada kaga saro mareyn midowga soofiyeet.
Waagaas waxaa dhanka hawada aad ugu fiicnaa midowga soofiyeet kuwaasoo 1961dii insaankii ugu horeeyay hawada u diray, wuxuuna mareykanka waqtigaas bartanka kaga jiray fashil siyaasadeed taasoo ay usii dheereyd in dagaalkii Fitnaam uu khasaaro xoogan kala kulmay.
Waxaa la sheegaa in sheegashada in dayaxa la tagay uusan xitaa aqalka cad ee mareykanka ka war qabin waxaana u sabab ah ayaa la yiri in Wakaalada NASA sanad kasta ay ku bixi jirtay maaliyad aad u badan balse aysan marnaba qabanin xitaa wax muuqda oo la sheegi karo, sidaas owgeed masuuliyiintii ka masuulka ahaa waxay garowsadeen in wakaalada albaabada la isugu dhufan doono hadii aysan wax muuqda la imaanin.
Si ay midowga soofiyeet uga sara maraan niyad ahaana u dilaan, sidoo kale si shacabka mareykanka looga soo jeediyo khasaaraha culus ee ciidamada mareykanka kasoo gaaray dagaalkii Fitnaam wakaalada NASA ayaa 1969kii ku dhawaaqday in 12 nin hawada sare u direen isla markaasna dayaxa dushiisa ku dageen.
Waxyaabaha ugu weyn ee shakiga kugu abuuraya ayaa waxay tahay in calanka mareykanka oo dayaxa dushiisa saaran misna dabeysha babineyso la arkay taasoo su’aalo badan la iska weydiiyay maadaama dayaxa dushiisa aysan marnaba dabeyl ka jirin.
Hase yeeshee wakaalada ayaa taasi kaga jawaabtay in awooda cuf isjiid aysan dayaxa dushiisa aheyn sidaas owgeed wax walba sidooda ayay ahaanayaan ilaa laga badalo.
Sidoo kale arimaha su’aalaha la iska weydiiyay waxaa kamid ah kaamirada loo adeegsaday muuqaalka sidey ugu adkeysatay heerkulka dayaxa dushiisa? Markabka cirbixiyeenada waday markuu dayaxa dushiisa ku dagay ma uusan sameynin wax saameyn boor ama godad taasoo iyadana su’aal kale ah.
Sidoo kale qaar kamid ah sawirada ay NASA soo bandhigtay oo su’aalo caqli gal ah laga keenay balse tan ugu daran waxay tahay hadiiba ay sax tahay in dayaxa dushiisa lagu dagay waxaa laga joogaa in kabadan 49 sano maxaa diiday markale in dayaxa dushiisa la booqdo?
Akhristow adiga ma aaminsantahay in NASA dayaxa dushiisa tagtay mise waxaad qabtaa inuu yahay khayaali been abuur ah??
Fakarkaaga hoos noogu reeb.
Hoos waxaad ka arki doontaa sawirada su’aalaha badan la iska weydiiyay kuwaasoo NASA xitaa sidii larabay uga jawaabi weysay.